Shikhar Samachar | कोरोना संक्रमण हुँदैमा मृत्यु हुँदैन, सरसफाइमा ध्यान दिऔं कोरोना संक्रमण हुँदैमा मृत्यु हुँदैन, सरसफाइमा ध्यान दिऔं
कोरोना संक्रमण हुँदैमा मृत्यु हुँदैन, सरसफाइमा ध्यान दिऔं
अझ महत्त्वपूर्ण कुराचाहिँ आत्मबल उच्च राख्न मद्दत गर्नुपर्छ। संक्रमण भइहाले पनि विचलित हुनुहुन्न, अपहेलना गर्नुहुन्न। साता दिनमा निको हुने रोग हो।
ड्रेक्सेल युनिभर्सिटी, फिलाडेल्फियाबाट घातक विषाणुबाट हुने जोखिम विषयमा विद्यावारिधि गरेका सुशील ताम्राकारसँग कोरोनाको जोखिमबारे गरिएको वार्ता :
कोरोना भाइरस नौलो विषाणु होइन यसका पुर्खा सन् १९६० पहिलेका हुन्। ताज (crown) आकारको आधाजीव आधानिर्जीव भएकाले यसको नाम कोरोना (corona)रहन गएको हो। सन् २००२ चीनकै ग्वाङडोङ प्रदेशमा सार्सको (SARS) को महामारी फैलिएको थियो भने सन् २००३ मा हङकङमा प्रकोप फैलिएको थियो। फलस्वरूप २००२/३ मा २९ देशका ७ सय ७४ जनाको मृत्यु हुन पुग्यो। त्यो बेला सो रोगबाट संक्रमित हुनेको संख्या ८ हजार ९६ थियो। सन् २०१२ जनवरीमा साउदी अरेबियामा मर्स (Middle East respiratory syndrome-MERS) फैलिएको थियो। उक्त प्रकोपले करिब २ हजार ५ सय जना संक्रमित भएका थिए र ८ सय ५८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
अहिले चीनको बुहान हुँदै विश्वभरि फैलिरहेको संक्रमणले हालसम्म चीनमा ३ हजार र विभिन्न देशमा अर्को ५ सय जना मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। यी सबै कोरोना भाइरसका सन्तान हुन् – कोभिड १९ (हालको ) MERS-CoV र SARS-CoV।
खासमा यी भाइरसहरु जनावरबाट जनावरमा सर्ने हुन्। समयक्रममा यिनीहरुको रुप परिवर्तन भई जनावरबाट मानवमा सरे। यो प्रक्रिया एक युगमा एकपल्ट मात्र हुन्छ। हालैको कोभिड-१९ भाइरस समुद्री खानाबाट सरेको अनुमान गरिएको छ भने अनुवांशिक (gynome) प्रोफाइल गरेर हेर्दा सर्पबाट सरेको अनुमान छ। चमेरोको सुप खाएकाहरुमा पहिलोपटक देखिएको अनुमान छ।
कोरोनालाई सामान्य रुघाखोकीजस्तै सिजनल फ्लु वर्गकै भाइरस तर अत्यन्त सरुवा र फोक्सोमा समेत आक्रमण गर्ने भएकोले मौसमी रुघाखोकीभन्दा अलि कडा खालको मान्नुपर्ने हुन्छ।
यो कोरोना भाइरस सर्ने मुख्य कारण के हो?
यस प्रकारका भाइरस मुख्यतया नाक, मुख र आँखा हुँदै फोक्सोमा प्रवेश गर्छन्। मुखबाट सर्ने न्यून सम्भावना हुन्छ भने आँखाबाट सर्ने सम्भावना झन् न्यून हुन्छ। संक्रमित व्यक्तिको शरीरबाट निस्कने तरल पर्दाथको कण (aerosol) (थुक, र्‍याल र कफ) मा टाँसिएर लाखौं लाख भाइरस निस्कन्छन् र ती हलुका हुने भएकाले केही समयसम्म हावामा तैरिरहन्छन्। स्वस्थ व्यक्तिले सास लिँदा ती भाइरस शरीरमा सर्ने सम्भावना रहन्छ। केही समयपछि ती भाइरस कुनै ठोस सतहमा गएर थिग्रिएर बस्छन्। स्वस्थ मानिसले भाइरस भएको सतहमा हात छुँदा औंलामा टाँसिएर आउन सक्छन् र जानी नजानी नाक छुने वा कोट्याउने गर्दा भाइरस नाक हुँदै छिर्छन्।
एक अध्ययनअनुसार स्वस्थ मानिसले दिनमा औसतमा १८ पल्ट नाक छुने वा कोट्याउने गर्दछ। ती एरोसोल (aerosols) हरु बढीमा १.५ मिटरसम्म मात्र तैरिन सक्छ र त्यो परिधिभित्र कसैले बेसकन सास तान्दाचाहिँ भाइरस तानिन सक्छ। अन्यथा सर्ने हात वा नाकले हो, हावाले होइन।
यो भाइरस किन यत्तिको खतरनाक मानिएको हो?
कुनै भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्दैमा व्यक्ति संक्रमित हुँदैन। निश्चित संख्यामा भाइरसको फौज भए मात्र मान्छेलाई भाइरसले गाँज्ने हो। फरक-फरक भाइरसको फरक-फरक न्यूनतम संख्या हुन्छ, संक्रमणका लागि। एड्स जस्तो ज्यानमारा रोग लाग्न १ लाखदेखि १० लाख PFU चाहिन्छ भने Ebola, Lassa जस्ता अत्यन्त घातक ज्यानमारा भाइरस १ PFU भए पुग्छ।
ड्रेक्सेल युनिभर्सिटीमा मैले अनुसन्धान गर्ने ल्याबमा मेरा एक सहकर्मीले गरेको अनुसन्धान अनुसार SARS-CoV, ४३ PFU ले १० प्रतिशत र २८० PFU ले ५० प्रतिशत स्वस्थ मानिसमा संक्रमण हुने देखिन्छ। हङकङमा भएको प्रकोपमा औसतमा ११० PFU भाइरसले संक्रमण देखाएको छ। PFU भन्नाले प्लेक (Plaque Forming Unit) भाइरसको संख्या गणना गर्ने एक इकाईको रुपमा बुझ्नुपर्छ। थोरै संख्याले पनि क्षति गर्ने भएकाले यो अत्यन्तै सरुवा र जोखिमपूर्ण मानिएको हो।
स्मरणरहोस्- एक थोपा खकार वा र्‍यालमा लाखौं भाइरस हुन्छन्। यो यति छिटो र सजिलैसँग सर्न सक्छ भन्ने कुरा यसको सर्ने दरबाट थाहा हुन्छ। एक संक्रमित बिरामीबाट १.४ देखि ३.८ व्यक्तिलाई सार्न सक्छ भने चीनमा अहिलेको संक्रमण दर एक व्यक्तिबाट ५.५ व्यक्तिमा सरेको तथ्यांकले देखाएको छ।
यसले सबैभन्दा बढी कसलाई आक्रमण गर्छ?
इम्युनिटी अर्थात् रोगसँग लड्ने क्षमता व्यक्ति व्यक्तिमा फरक हुन्छ। सामान्यतया स्वस्थ वयस्कको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च हुन्छ र बाह्य तत्त्व (भाइरस, व्याक्टेरिया, बिष, धुलो आदि) शरीरमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै हाम्रो प्रतिरक्षा सेना सतर्क हुन्छ र त्यसविरुद्ध लड्न परिचालित हुन्छ। त्यसैले जसको सेना कमजोर छ त्यो हार्छ, प्राकृतिक नियम नै हो। कोरोना पर्याप्त संख्यामा शरीरमा प्रवेश गरेपछि (incubation period) संक्रमणको लक्षण देखा पर्छ। स्वस्थ्य वयस्कहरु रोगले थला परे पनि रोगसँग हार्दैन। जसको प्रतिरोध क्षमता (immunity) कमजोर छ, जस्तै उमेर ढल्केका, कुनै ठूलो रोग भएकाहरु जस्तै किड्नी फेरिएका, डायबिटिज भएका, हेपाटाइटिस भएका, कुनै ठूलो सर्जरी गरेर बसेका वा सुत्केरीमा जोखिम बढी हुन्छ। सामन्यतया नवजात शिशु पनि यस वर्गमा पर्नुपर्ने हो तर यो कोरोनाचाहिँ नवजात शिशु तथा बालकमा दयालु भएको देखिन्छ।
याे भाइरस कस्तो वातावरणमा सर्छ?
यो भाइरस उच्च तापमान र आद्रतामा निष्क्रिय हुन्छ। २६-२७ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि तापमानमा निष्क्रिय र ४५ डिग्रीको हाराहारीमा नष्ट हुन्छ। अहिलेको वातावरण कोरोनाका लागि सुहाउँदो छ। भेन्टिलेसन कम भएको वा नभएको कोठा सबैभन्दा जोखिमपूर्ण हुन्छ। ड्रेक्सेल युनिभर्सिटीका प्रोफेसर डा. चार्ल्स एन हासका अनुसार शरीरबाट निस्केको भाइरस २४ घण्टामा १० करोडबाट घटेर १ सयमा सीमित हुन्छ। अर्थात् वातावरणमा स्वतः मरेर वा नष्ट भएर जान्छन्। तसर्थ बिरामीले प्रयोग गरेको लुगा, बिछ्यौना वा अन्य सरसामानमा २४ घण्टापछि न्यून संख्यामा मात्र भाइरस बाँकी रहन्छन्। यसको अर्थ संक्रमणको सम्भावना कम हुन्छ, शून्यचाहिँ हुँदैन।
सामाजिक वातावरणको कुरा गर्ने हो भने हवाईजहाज, बस, माइक्रो बस, सिनेमा हल, पार्टी भेनु सम्भाव्य जोखिमपूर्ण स्थान हुन्। यसको अर्थ ती ठाउँमा जानै हुन्न भन्ने हैन।
संक्रमण र रोगका लक्षण के के हुन्?
मौसमी भाइरल ज्वरोजस्तै सुरुको लक्षण देखा पर्ने हुन्छ। जिउ दुख्ने, ज्वरो आउने, रुखा, खोकी र घाँटीमा समस्या हुँदै श्वासप्रश्वासमा समस्या आउँछ। भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेको ३ दिनदेखि १४ दिनसम्ममा रोगका लक्षण देखा पर्दछन्। औसतमा ६ दिनमा रोग देखिन थाल्छ। सामन्यतया स्वस्थ वयस्कलाई रोगले गाँजे पनि उपचारपछि निकाे हुन्छ। वृद्ध र अन्य रोगबाट शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर भएकाको भने ज्यान जाने सम्भावना रहन्छ। चीनमा हालसम्म मृत्यु भएकाहरु पनि अधिकांश ६५ कटेका हुन्।
यसको फैलावट-प्रसार रोक्ने प्रभावकारी उपाय के हो?
मूलत: रोग देशमा भित्रिन नदिनु नै उत्तम उपाय हो। हवाई नाकामा हवाईजहाज चढ्नुअघि नै थर्मल स्क्यान गरेर सम्भावित व्यक्तिको पहिचान गरेर छुट्याउनुपर्छ। देशमै छिटपुट घटना देखिए, बिरामीलाई एक्लाएर आवश्यक उपचार गर्ने त छँदै छ, अन्य व्यक्तिले निम्न केही सतर्कता अपनाए जोखिम कम हुन्छ-
१. साबुन पानी वा स्यानिटाइजरले हात धुने।
२. मेडिकल मास्कको प्रयोग (मास्कले भाइरस रोक्ने हैन, हात र नाकबीचको सम्पर्क सेतुमा ब्रेक लाउने हो)
३. भीडभाडमा नजाने।
४. शंकास्पद बिमारीबाट टाढै बस्ने ।
५. शंकास्पद लक्षण देखापरे अविलम्ब अस्पताल जाने।
खानपानमा के सुधार गुर्नपर्छ?
खानेकुरा र कोरोनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन। स्वस्थ र पौष्टिक खाना खाँदा प्रतिरोध क्षमता (immune system) लाई बल मिल्छ। संक्रमण भइहाले पनि घाँटीमा समेत असर गर्ने भएकाले ठोस पदार्थ निल्न गाह्रो नै हुन्छ। तसर्थ सुप, जाउलो, जुस, झोल पदार्थ प्रशस्त खानुपर्छ। स्वस्थ मासुको झोल वा नरम मासु खाए पनि हुन्छ। जति सक्यो त्यति तरलपदार्थ खानुपर्छ। भाइरस दिसापिसाबबाटै बगाइदिने हो।
कोरोनाको कुनै औषधि वा उपचार विधि पत्ता लागेको छ?
सरल भाषामा भन्नुपर्दा यसको रामवाण औषधि उपलब्ध छैन। अमेरिकामा गत बिहीबार मात्र भ्याक्सिन बनाउने संस्थाले सम्बन्धित निकायमा स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरेको छ। सामान्य रुघाखोकीकै लक्षणमा ज्वरो र निमोनिया थपिने भएकाले लक्षणअनुसारको उपचार भने गर्नुपर्छ। भाइरसलाई नै सखाप पार्ने न त कुनै औषधि छ न त कुनै भ्याक्सिन नै। घाँटी र छातीलाइ बचाउन सकियो भने ७-८ दिनमा आफैं ठीक हुन्छ। कुनै विशेष औषधि आवश्यक पर्दैन।
नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना प्रमाणित भएको छैन भनिएको छ। यद्यपि कोरोनाको जोखिमबाट बच्न हामीले के गर्नु उत्तम होला?
नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भिसा लिएर आएको छैन। तर, चोर बाटोबाट छिरिसकेको छ। केही दिनअघि चीन हुँदै नेपाल भ्रमण गरी फर्केका स्पेनका नागरिकको मृत्यु भएको पुष्टि भयो। चीनमा कोरोनाको संक्रमणको भयावह भइसक्दा पनि दैनिक सयौं मान्छे बिनारोकतोक आइरहेका थिए। चीनबाट आगमन रोक्नुपर्नेमा अस्तव्यस्त व्यवस्था र गैरजिम्मेवार सरकारले उल्टो चाइनाबाट पर्यटक ल्याउने भाषण गरेर हिँड्यो। सरकार र स्वास्थ सेवासँग सम्बन्धित निकायले जति ढ्वांग फुके पनि सतहमा काम भएको देखिएको छैन। धेरै ढिलो भइसक्यो, धेरै देशसँग हवाई उडान स्थगित धेरै अघि नै गर्नुपर्थ्यो।
नागरिक आफैं जागरुक हुने हो। मास्क कालो बजारी सुरु भएको छ। औषधि बट्टाका बट्टा किन्न थालिएको छ। मास्क र औषधिले संक्रमण रोकिन्न। सरसफाइ र हात धुवाइले रोकिन्छ।
धेरै मान्छेहलाई यो रोग लाग्यो भने त ज्यानै जान्छ भन्ने डर छ। सत्य के हो?
रोग लाग्दैमा मृत्यु हुने होइन। हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा सेनाले प्रतिरक्षा गर्ने प्रयास गर्दछ नै। संक्रमित भए पर्याप्त आराम गर्ने, पर्याप्त तरल पदार्थ सेवन गर्ने, घाँटीको दुखाइ र श्वासप्रश्वास सहज गर्ने औषधि सेवन गर्ने र कोठा चोटामा आद्रता पर्याप्त कायम राख्ने गर्नुपर्छ। १९ वर्षमुनिका लागि भने जिउ दुखेका बेलामा ऐस्पिरिन नदिने, इब्रुफिन वा सिटामोल मात्र दिने।
महत्त्वपूर्ण कुराचाहिँ आत्मबल उच्च राख्न मद्दत गर्नुपर्छ। संक्रमण भइहाले पनि विचलित हुनु हुन्न, अपहेलना गर्नु हुन्न। साता दिनमा निको हुने रोग हो।
३१ डिसेम्बर : चीनको वुहान सहरमा पहिलो पटक कोभिड देखिएको दिन
विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण पहिलो पटक पुष्टी...